Bogaadin shirwaynihi Beelaha Siwaaqroon (Prof. Maxamed Xareed) | raascasayrmedia.com
← Afhayeenka AMISOM oo sheegay inay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay isugu ballaariyaan Muqdisho
Maamullada Ximin iyo Xeeb iyo Galmudug oo ku hishiiyay inay sameystaan ciidammo ammaan oo mideysan →
March 23, 2011 · 7:42 pm
Bogaadin shirwaynihi Beelaha Siwaaqroon (Prof. Maxamed Xareed)
Waxan hambalyo iyo bogaadin u soo tebineynaa beesha reer Sheikh Xuseen, Siwaaqroon meel kastay ay kala joogaan ba. Waxan ugu hambalyeyneynaa beesha guusha weyn ee laga soo hoyay shirweynihi beelaha Siwaaqroon oo lagu qabtay magaalada Baargaal. Waa marki ugu horeysay ee shirweyne heerkaas sare ahi ka dhaco degaankeena ama ba guud ahaan Puntland. Waa markii ugu horeysay ee ay bulshada sadexda degmo (Caluula, Baargaal iyo Laasasurad) ee beeshu shirweyne isugu yimaadaan ay kaga arinsadaan horumarinta dadkooda iyo degaankooda. Waa marki ugu horeysay ee ay ergooyin tayo iyo tiro heer sare leh ee qurbajoogta beeshu ka soo qaybgalaan shirweynaha tolkood. Waxa na wada faraxad iyo ididiilo na geliyay guulaha laga soo hoyay shirweynaha iyo sida habsamida leh ee uu u dhacay kun a dhamaaday iyo go’aamada dhaxalgalka ah ee ka soo baxay.
Waxa ammaan mudan qof kasta oo ka qaybqaatay suurtagelinta shirweynaha khaas ahaan isimada, cuqaasha, siyaasiyiinta, qurbajoogtada, ganacsatada, culumada, dumarka iyo dhalinyarada beesha. Waxan si gaar ah ugu mahadsan bulshada reer Baargaal oo door weyn ka qaatay in shirgu hirgalo, culeyski martigelineed iyo shaqada xooga leh dusha u dhigtay.
Waxa sidoo kale amaan mudan qaybahay isgaarsiinta sida: Baargaal.et, Allcaseyr.net, Horseed.net iyo telefoonka isku xirka beesha oo ay noo fureen bahada Woqooyiga Mareykanka. Qaybaha isgaarsiintu waxay si joogto ah noola socodsiinayeen, noogu na soo tebinayeen sida shirku u socdo. Waxay noo soo tebinayeen maqal iyo muuqaalba sida looga soo qaybgalay iyo guulaha ka soo baxay.
Waxa sanooyinkaan dambe beeshu ay ku tilaabsatay guulo la taaban karo sida:
– doorashadi iyo caano shubki beeldaajaha,
– xiriirka wacan ee ka dhexeya bulshada sadexda degmo ee beesha Siwaaqroon,
– shirkii beesha ee ka dhacay wadanka Sweden oo ay ka soo baxeen go’aano dhaxalgal ah,
– isku xiraanta qurbajoogtada iyo daljoogtada beesha oo si wacan u hirgalay,
– shirweynihi beesha ee ka dhacay Baargaal oo u horseeday beesha dow horumarineed iyo karaamo ummadeed.
Waxan soo jeedineynaa in arimahan la tixgeliyo
Waxa haboon in la isweydiiyo arimaha beesha u horseeday horumaradan la taabankaro iyo sida loo joogteyn karo.
Waxa jirta xigmad carabi ah oo leh: Haddii ay bulsho doonto nolol sharaf iyo karaamo leh waa in ay la timaadaa go’aanki iyo kartidi lagu hanan lahaa gobanimo iyo karaamo.
Waxa ugu weyn oo bulsho gaarsiiyo horumar, gobanimo iyo karaamo ummadeed waa midnimo. Diintayada macaan iyo dhaqankeena soo jireenka ahi waxay na farayaan nagu na adkeynayaa midnimo, dadaal, shaqo iyo kala dambeyn.
Waxa muuqata in dhibaatada ku habsatay Soomaaliyaa 20ki sano ee la soo dhaafay in qof kasta oo waxgarad ahi dersi ku qaatay. Sida qura oo qof ama beeli u si jiri kartaa, una badbaadin kartaa naftooda iyo hantidooda waa in uu ku xiranyahay bahdiis iyo beeshiisa. Ma jiro qof keligiis meel istaagi karaa awood kasta uu leeyahay ba. Qurbajogtada iyo daljoogtada beel kasta ba meesha ay u ciirsadaan manta waa beeshooda xag kasta. Waxa ugu xun, ugu na ciil badan ee qof ama bulsho loo geysto waa marka la liido ama xaqiisa la duudsiiyo usaga oo soo taagan.
Waxa muuqata in beesha Siwaaqroon ay dersi ku qaadatay waxyaalaha xun ee Soomaaliya haysta. Taasi waxay isu soo dhoweysay qaybaha beesha ee dunida ku kala baahsanaa. Waxa si wacan isu bartay xubno badan oo kala firiqsanaa oo ku kala noolaanjiray gobolo badan sida: Kismaayo, Kenya, Xamar, Belet weyne, Baydhabo iyo meelo kale oo badan. Intaas oo dhammi haatan waa isbarteen waa na wada xiriiraan, waxa na isku xirtay danta guud. Waxa is biirsaday fikrado badan iyo waayoargtinimo dheeraad ah. Waxa kale oo jira in xubna beeshu ayan badankoodu aqoon degaankooda iyo qiimaha uu leeyahay. Waxa loogu sheekeynjiray meel lama degaan ah oo aan wax ba ka bixikarin. Taasu waa beenowday, oo degaankeenu waa kan ugu kheyraadka badan Puntland ama Soomaaliya. Taas ayaa manta beeshu ogaatay, waxan na ugu yeereynaa in lala yimaado kartidi loo la soo bixi lahaa barwaaqada degaankeena. Horumarka teknoolojiyada cusub ee isgaarsiinta sida telfoonka casriga ah, telefiishanka iyo internetka waxa laga dhaxlay biseyl iyo kororsi aqooneed. Taas waxa laga bartay sida wacan ee loo dodo oo fikradaha la isu dhaafsado loo na mookhalo oo laga xusho tan saxa ah loogu na dhaqmo si wadajir ah. Tan kale beesha waxa u soo baxay dhalinyaro badan oo aqoon sare leh oo u diyaar ah in ay beesha u hogaamiyaan horumar, midnimo iyo gobanimo. Dhalinyaradaas badankoodu ma kala yaqaaniin sida beesha siwaaqroon ay ugu kala qaybsayihiin qoysqoys, waxay na ku abtirsadaan oo ku hirtaan magaca guud ee beesha Siwaaqroon. Taasu waa wax loo riyaaqo oo horumarka beesha sii kordhineysa, waayo waxa xoogsanaya midnimada iyo iskuxiraanta beesha. Waxa kale oo haboon in la xusu waa in manta dumarki beesho ay dhexda u xirteen dadnta guud ee beesha. Bulsho waxay horumart higsan kartaa marka ay rag iyo dumarku ay wada halgamayaan, waayo gacmo badan baa guuli ku jirtaa. Qof laba gaca leh iyo mid hal gaca keli ah lihi ma tartami karayaan.
Maanta waa noo halahaansho iyo higsasho horumar dhab ah.
Prof. Maxamed Xareed
3 responses to “Bogaadin shirwaynihi Beelaha Siwaaqroon (Prof. Maxamed Xareed)”
waa in laga tashtaa wax magaradka ku abtirsda beesha maxamuud saleebaan cadaaladu hawaarto plland ayaga malaha umad bay ka dhaxaysaa hadaan lays afgaran waa lakala tagayaa ,anigoo ku hadlaya beesha calisaleebaan hambalyo ayaan leeyahay cadaaladu hawaarto ilaahay baa caadil ah oo magacyadiisa sharafta leh ka mid ,insan xun ka yeeli mayno inuu magaceena ku qaraabto hantideena ku duulo majirto ayaan leeyahay
run ahantii waa wax lagu farxo ah umad isutimi oo isugutimi si ay aayaheeda uga tashato waxana orankaraa sida brof ucadeeyay waa horumar wayn inagoo og umadi talo la an inanay horumarain hadaba manta taladii wahaynaaye an wax qabadkeedii lanimadno brof xareedna waa uga mahad celinayaa sida wanaagsan ee kal iyo labta ah ee uuga faalooday shirkii bargal kadhacay waa na mahadsantahay brof
waan ku salaamay walaal xared
si aad iyo aad ah ayaan kuugu soo mahad celinayaa ,sida wanaagsan oo aad noogu cadaysay amuuraha,iyo talaayinka wanaagsan oo aad noo soo gudbisay.